अर्जुन पन्थी - कान्तिपुर समाचार
२२ असार २०७३ को कुरा, मार्टिन चौतारीका लागि म्यागेजिन जम्मा गर्न शिव रेग्मीको कुटीमा गएको थिएँ  । तल्लो तलाभरि पत्रिकैपत्रिका पुस्तकैपुस्तक थिए  ।
खड्मास भएर होला, भद्रकालीको आकासेपुलबाट हेर्दा टुँडिखेल पुंmग देखिन्छ। वरिपरिका विशाल भवनले यसलाई रङ्गहीनशाला बनाइरहेका छन्। बहत्तरे भूकम्पपछि धरहरालाई मसान बनाई सुतिरहेको टुँडिखेलको दक्षिणी फेँदमा गएको वर्षायाममा झपक्कै झारहरू हल्किएका थिए।
डोला मैयाँको मूल्य
हाम्रा कन्या हेरिलिन्छौ भन्या ४०/५० हजार रुपैयाँ पैल्है देउ कन्या हेरेपछि छोड्न्या छैनौं भनी कबोल गर’ भनियो, बिनापैसा कन्या देखाउँदै देखाइएन । कन्या हेर्ने र खोट लाएर छाड्ने हुनाले दिक्क भएर हो, या मूल्य नै त्यति भएर हो, नेपाली राजकुमारको निम्ति कन्या खोज्न गएका डोलेहरूलाई उत्तरी भारतका रजौटाले यसो भनेपछि उनीहरू अलमलमा परे ।
अहिले बिजुलीसँगको दैनिकी बडो घनिष्ठ छ, तर कैदपूर्ण । लामो रुटमा यात्रा गर्दा केही सवारीले वाइफाई सेवा मात्र हैन, चार्जर घुसार्ने प्लग बनाइदिनुपर्ने बाध्यता बन्दै छ । खानाखाजा खाने ठाउँमा यात्रु ओर्लेपछि अडर गर्नु पहिला प्लग खोज्दै हिँड्नेहरू देखिन्छन् ।
मान्छेको मूल्य !
वस्तुबारे लेखिरहँदा मनमा एउटा प्रश्न बाराम्बार आइरहन्थ्यो– मान्छेको बारेमा किन नलेख्ने, ऊ पनि वस्तु होइन र ? कुनै चीज ‘वस्तु’ त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला त्यो नाफाका लागि राखिन्छ ।
अर्जुन पन्थीका लेखहरु :
हिजोआज सराव पिएर सवारी गरेमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) को कसुरमा प्रहरीले समात्न सक्छ। तर पनि कतैकतै मद्यशालेहरूले चुनौती दिने नियम बनाएका छन्, ५ हजारसम्मको मापसे गर्नेलाई आफ्नो गाडीमा घरैसम्म पुराइदिने व्यवस्था।
कीर्तिपुरमा सँगै पढेका साथीसँग थापाथलीमा भेट्ने कुरा मात्र होइन चौतारीमा भेटियो पनि । सामान्य सन्चोबिसन्चोपछि बसेर कुरा गरौँ न त भन्ने भयो, तर कहाँ ? कुरा मिल्यो, नजिकैको चियापसलमा । पसलैपसलको सहरमा चिया नपाउने कुरै थिएन ।
बिजुली आएपछि गाँवै अँध्यारो !
टुकीको उज्यालोमा मध्यरातको एक बजेदेखि नै च्युरा कुट्ने हाते औजार ‘लुसी’ ले उगल (ओखल) मा ट्वाङ–ट्वाङ गरी च्युरा कुट्दा आउने आवाज अब भक्तपुर बोडे–टिगनीबासीका सम्झनामा मात्र छन् ।